Manontany Ny Doka Antoko Komonista Shinoa Hoe: ‘Iza Moa Aho?’ Mamaly Ny Media Sosialy Hoe: ‘Mpanao Kolikoly.’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Aogositra 2016 4:37 GMT
Afisin'ny Foibe Fahitalavitra Shina: Iza aho?
Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'i Gene Lin ary navoaka voalohany tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 27 Jolay 2016. Navoaka eto amin'ny Global Voices ity lahatsoratra nasiam-panovana ity noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Nanomboka ny doka voalohany ny Antoko Komonista Shinoa mba hankalaza ny tsingerintaonany faha-95. Novokarin'ny Foibe Fahitalavitra Shina tantanin'ny fanjakana ny lahatsary mitondra ny lohateny hoe “Iza aho?” ary nankalazaina fatratra tamin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao mahazatra sy antserasera.
Dokambarotra manomboka amin'ny fanontanian'ny mpitantara hoe “Iza moa aho? Olona manao ahoana aho? Angamba ianao mbola tsy nieritreritra momba izany.” Avy eo asehony tanora mpampianatra mandao efitrano fianarana tsy misy mpianatra ka miteny ny mpitantara hoe:” Izaho no miala farany. “Avy eo, misy mpamafa lalana mipoitra, ary hoy ny mpitantara,” Izaho no tonga hiasa voalohany. “
Mpitsabo mpandidy, polisy manamboninahitra, mpibata entana sy sekreteran'ny antoko eo anivon'ny tanàna ireo mpiantsehatra hafa miseho. Ny hafatra famaranana dia: “Izahay no Antoko Komonista eto Shina. Miaraka aminareo foana izahay. “
Nanaparitaka ny lahatsary tao amin'ny sehatra media sosialy miaraka amin'ny fampahafantarana fohy ireo bilaogera mpomba ny fanjakana sy ny fampahalalam-baovao miaraka amin'ny fanjakana tamin'ny 27 Jolay, izay tahaka ity manaraka ity:
Ry namana, nanamarika ve ianao fa nanomboka namoaka dokambarotra vao haingana ny antokontsika? Andeha fantarina bebe kokoa ny antoko [komonista] ary handray anjara bebe kokoa amin'izany sy ho an'ny firenena.
Na izany aza, misy ireo sasany tsy mankafy ny dokambarotra. Nanamarika ny bilaogera iray hoe:
Toy ny sabatra roa lela ny dokambarotra … Raha tsy mahavita manatanteraka ny zavatra ampanantenainy amin'ny dokambarotra ny antoko, dia manala baraka ny tenany izy.
Eny indrindra, nanomboka nanontany “Iza moa aho?” ny mpiserasera, ary tsy voatery mankasitraka ny Antoko Komonista Shinoa foana ny valiny:
Izaho no iray nasandratra, Izaho no misitraka tombontsoa maro, Izaho no olona tsy ho voasongonao mandrakizay, satria tsy afaka manongana ny antoko na oviana na oviana ianao.
Ianareo no [mpanao politika naetry voninahitra] Zhou Yongkang, Bo Xilai, Guo Boxiong, Xu Caihou, Ling Jihua , marobe ianareo miafina ao ambadika ao.
Mazava loatra, voafafa vetivety ireo fanehoan-kevitra ireo, na noesorin'ny mpanivana na noesorin'ny mpanoratra azy ireo ihany amin'ny hetsika fanivanan-tena
Toa fikasana hametraka indray ireo mpikambana ao amin'ny antoko ho toy ny mpanompon'ny vahoaka eo imason'ny Shinoa izay mifanohitra amin'ireo sangany mpanao kolikoly sy nomena tombontsoa ao amin'ny fitondrana ny dokambarotra, fahatsapana asehon'ny fehezanteny malaza hoe “fianakaviana Zhao” izay nipoitra voalohany tamin'ny faramparan'ny taona 2015.
Ny andian-teny dia nalaina tamin'ny tantara “Ny tantara marina momba an'i Ah Q” notontosain'ilay mpanoratra Shinoa malaza Lu Xun (1881-1936) ary mampiseho ny fifandraisana eo amin'ny “azy ireo” sy “antsika.” Mampiasa ny fehezanteny ny mpiserasera Shinoa mba hanazavana ny tsy fifandanjam-pahefana eo amin'ny fiarahamonina Shinoa Tanibe amin'izao fotoana izao izay misoavaly ny zavatra hafa rehetra ny tombontsoa manokan'i “Zhao,” enti-maneho ny Antoko Komonista Shinoa. Voaràra tamin'ny aterineto nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana Janoary 2016 ny voambolana.
Eo ambanin'ny fitsipiky ny Antoko Komonista Shinoa, tokony ho mpitondra ny tenin'ny antoko ireo fampahalalam-baovao. Zava-baovao ny fampisehoana fampielezan-kevitra ara-politika amin'ny endrika dokambarotra. Ahitana singa marobe mampihetsi-po sy mampitolagaga hita amin'ny dokambarotra ara-politika avy amin'ny fiarahamonina demaokraty mandritra ny fotoam-pifidianana mihitsy ilay dokambarotra.
Araka ny tatitra nataon'ny fampahalalam-baovao miaraka amin'ny fanjakana, the Paper, dia nalaina sary tao Shanghai tao anatin'ny telo andro ity dokambarotra ity, nandaniana 20 andro ny famokarana manontolo hamitana azy. Mitondra ny lohateny hoe “Mitempo ny Fo” Ny dokambarotra manaraka ho fankalazana ny tsingerintaona faha-95n'ny antoko. Miaramila antitra avy ao amin'ny Tafika Fanafaham-Bahoaka no ho mpitantara.